Xiaomi mepere ụlọ ahịa nke abụọ ya na intali na Rome | Gam akporosis
Xiaomi mepere ụlọ ahịa nke abụọ ya na Italytali
Edere Ferreno | | Noticias, Xiaomi
Xiaomi abawanyewo na mba ụwa na oke ọnụ ọgụgụ n'ime afọ abụọ gara aga. The Chinese ika emepewo ọtụtụ ndị ụlọ ahịa na Spain, nke bu isi ahia ya na Europe. Na mgbakwunye, n'ime afọ gara aga ọ gbasaa na ahịa ndị ọzọ na Europe, na oghere nke ụlọ ahịa mbụ ya na Italia na France.
Ọbụna izu ole na ole gara aga, mba ọhụrụ abanyelarị na Europe ebe e mepere ụlọ ahịa Xiaomi, Romania na nke a, dị ka anyị na-agwa gị. Ma ugbu a, ika a siri ike nye Italytali, ebe ọ bụ na izu ụka a emeghewo ụlọ ahịa nke abụọ na mba ahụ. Rome a họọrọ obodo.
Dị ka ọ dị na Milan, nke bụ obodo izizi Italytali nwere ụlọ ahịa Xiaomi, agba nzọ na ụlọ ahịa dị ka ebe ya. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ụdị ndị China maka ịkụ nzọ na ebe a na-azụ ahịa n'echiche a. Ihe ha kwughachiri na nke a na ụlọ ahịa dị na Rome.
Na nke a ọ bụ Porta di Roma, nke bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịzụ ahịa kachasị mkpa n'isi obodo Italiantali. N'ihi ya, ọ bụ ọnọdụ dị mkpa maka akara ndị China. Ebe ha maara na ọtụtụ mmadụ na-agabiga na ya. Ezigbo ụzọ iji nweta ndị ahịa na nke a.
Emeghela ụlọ ahịa Xiaomi a na izu ụka a. Enweela ụfọdụ nkwalite, na mgbakwunye na ịbịachi nke ọma. Ya mere, ọ na-eme ka o doo anya na enwere mmasị na ụlọ ọrụ dị na Italytali, ahịa nke ha na-etolite na ezigbo ije. Enwere ike ịnwe ụlọ ahịa ọhụụ na mba ahụ n'oge adịghị anya.
Xiaomi na-ekwusi ike ya imeghe ụlọ ahịa na Europe. Anyị na-ahụ otú ụlọ ọrụ na-abawanye na ezigbo ijeụkwụ N'ime kọntinent. Ọ bụghị naanị ahịa gị ka ịchọrọ. Ebe ọ bụ na ika na-arụ ọrụ na oghere nke Storeslọ ahịa 5.000 na India naanị otu afọ. A ịma aka na-ekwe nkwa na-mgbagwoju anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi mepere ụlọ ahịa nke abụọ ya na Italytali
Redmi Rịba ama 7 na-aga mbara igwe ma si ebe ahụ were foto fromwa
Huawei na-arụ ọrụ na mbadamba nkume ọhụrụ na igwefoto MPN 48